RC Cars for Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 Rotating 4WD Off Road Double misy rindrina Rotating nirodana - High Speed ​​2.4Ghz Rock Crawler Vehicle amin'ny jiro Ankizy Birthday Gifts RC Car for Kids - Jomo Teknolojia Co., Ltd
RC Cars for Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 Rotating 4WD Off Road Double misy rindrina Rotating nirodana - High Speed ​​2.4Ghz Rock Crawler Vehicle amin'ny jiro Ankizy Birthday Gifts RC Car for Kids
1.High lalana haingana sy eny: Ny fiara roa matanjaka Motors amin'ny 4WD, azo antoka ny hafainganam-pandeha avo. Very malefaka kodiarana, dia mora ny manao haingana mifandimby.
2.Best fanomezana ho an'ny ankizy: amin'ny onjam-peo 2.4GHz lavitra rafitra fanaraha-maso, ny RC fiara tonga lafatra fitsingerenan'ny andro nahaterahany, Noely fanomezana ho an'ny ankizy.
3.All karazana fitaka: mahagaga 360 stunt flipping ambaratonga famolavolana, mety ho an'ny ankizy na ny kilalao fiara Lover. Double lafiny mihazakazaka, nandroso, niamboho, miankavia, mivily ankavanana, 360 mari-pahaizana flipping nirodana. RC fiara fotsiny mandeha foana na inona na inona izany, na mamely ny fomba tany, hanome anao traikefa mangatsiaka hafa!
4.High kalitao ara-nofo: avo-tsara plastika, mafy sy mateza fiara vatana, sy ny crashworthiness ruggedness bebe kokoa. Ny kodiarana dia vita amin'ny fingotra, mora ny mandresy misy toe-javatra ivelan'ny trano.
5.Guarantee: ny fiara mampiasa 3.7V 400mAh rechargeable bateria (tafiditra) miaraka amin'ny USB tariby (tafiditra), 15 - 20 minitra milalao fotoana, 2 ora mamaly ny fotoana. KOOWHEEL manome ny manontolo na hanakalo refund vaovao mba ny iray ho ao anatin'ny 30 andro. Vonona ny valin tamin'ny 24 hours.So hanampy ny hovidiana izao!
Previous: RC Cars KOOWHEEL 1:16 Scale 2WD Off Road Remote Control fiara amin'ny 2 Rechargeable Battery 2.4GHz Radio Remote Control Truck Monster High Speed ​​Crawler USB Charger RC Car ho an'ny olon-dehibe sy Kids (Blue)
2.4G Remote PO CAR
2,4 GHz fanaraha-maso onjam-peo: mafy manohitra ny fitsabahana, izay hanampy maro miara-fiara ho nidobodoboka be tamin'izany andro izany sy ny toerana. Raha mahazo 2 more KOOWHEEL RC kamiao, dia mahafinaritra kokoa ny mihazakazaka lafiny maro amin'ny lafiny fiara.
3 antony etsy ambany ho an'ny mitondra fiara-fohy-andro ny bateria: Ny mamaly ny fotoana fohy loatra mba hanohanana ny lalao.
Radio ravin: 2.4GHz
mamaly ny fotoana: 180mins
Battery fiainana: ny 15mins
Battery fanaraha-maso Remote: 2 * 1.5V AA vatoaratra ( tsy tafiditra)
Functions: miankavia, mivily ankavanana, anoloana, indray
Package Dimensions: 16.1 X 11 santimetatra X 3.9
Net lanja: 1,1 kilao
Service sy ny Warranty:
12-volana fanoloana fiantohana, androm-piainany noho ny nanamboatra.